यस्ता छन् तातोपानीमा नुन मिसाएर खानुका फाईदा
बुधबार, १० असोज, २०७५
खानामा नुनको मात्रा धेरै भयो भने शरीरमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । तर यदि समुद्री नुन तथा यतिकै नुनलाई हरेक दिन विहान एक गिलास पानीमा मिसाएर पिउनाले कैयौ रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ । त्यसैले तातोपानीमा नुन मिसाएर पिउनुका यस्ता १० फाइदा पाउन सकिन्छ।
पाचन प्रक्रियामा सुधार यसले मुखमा भएका सेलीवरी ग्ल्यान्डलाई सक्रिय गराई पाचनप्रक्रियामा सुधार ल्याउछ ।
मोटोपन नियन्त्रण नुनमा घुलनशिल क्षमता बढि हुन्छ । यसकारण नुनपानीले शरिरलाई डिटोक्स गर्नुका साथै मोटोपना कम गर्दछ ।
यस किसिमको घोलनशिलमा प्रशस्त क्याल्सियम पाइने हुदा हड्डीलाई मजबुत बनाउछ । नियमित रुपमा नुनपानी पिउनाले हड्डि मजबुत हुन्छ ।
यसबाट प्रयाप्त मात्रामा सल्फर र क्रोमियम पाइन्छ । जसले छालालाई स्वस्थ र नरम बनाउछ ।
नुन पानीले ठुलो आन्द्रालाई सक्रिय गर्ने हुदा कव्जियत तथा पेटसम्बन्धि सम्पुर्ण रोग लाग्नबाट बचाउछ ।
यसले शरीरमा भएका स्ट्रेस हर्मोनको लेभल कम हुदै जान्छ । यसबाट राम्रो निद्रा लाग्छ ।
मुख तथा घाटीमा भएका घाउ खटिरा निको हुन्छ ।
यसमा एन्टि ब्याक्टेरियल तत्व हुन्छ । जसकोे कारण खतरनाक व्याक्टेरियाले शरिरमा आक्रमण गर्न सक्दैन ।
नुनपानीे पिउदा पेटमा ग्यास जम्न पाउदैन । यसले ग्याष्ट्रिक रोकथाम गर्नमा सहयोग पुर्याउछ ।
यसबाट मांशपेशीलाई फाइदा पुग्ने तत्व पाइन्छ । जसको कारण मांशपेशी दुख्ने समस्या कम हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीकाे हातमा साबेल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्गमा (अप्टिकल फाइवर नेटवर्क) को धादिङको गल्छी गाउँपालिका वडा नं. ४ मासटारमा सोमबार शिलान्यास गर्दै ।
‘मिडियासम्बन्धी विधेयकमा परामर्श नगर्नु गलत’
भक्तपुर । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले संसद्मा दर्ता गरिएको मिडिया विधेयक सरोकारवालासँग परामर्श नगरी एकोहोरो रुपमा ल्याउनु गलत भएको बताएका छन् । रफत सञ्चार क्लबमा आज
बन्द विमान कम्पनीको बक्यौता असुल्न समस्या
काठमाडौँ । सञ्चालनमा नरहेका र टाट पल्टेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको करीब रु. १३ करोड बक्यौता असुल गर्न कानूनी जटिलता देखिएको छ ।